मैले भर्खर नूहलाई $ 1000 पठाएको! | Martech Zone
मैले भर्खर नूहलाई $ 1000 पठाएको!
आइतवार, नोभेम्बर 25, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यसमा ढीलो रनको लागि माफ गर्नुहोस्! हामीले प्रविष्टिहरूको सूची पठाएका छौं Ade प्रत्येक प्रविष्टिसँग एक अनियमित संख्या सम्बन्धित रहेको (एक्सेलमा RAND प्रकार्य प्रयोग गरेर र त्यसपछि स्तम्भ क्रमबद्ध गर्दै)। हामी त थियो Hannes १० ent प्रविष्टिहरू बीचमा एक अनियमित संख्या चयन गर्नुहोस् ताकि हन्नेसलाई थाहा थिएन कि विजेता को हुने थियो। $ १,००० सस्ता दिने विजेता नोआमा थिए wpstar.com!
Paypal लेनदेन लागतहरू कभर गर्न, मैले नूहलाई $ १,०1,040० पठाए! बधाई छ नूह! बाँकी पुरस्कारहरू पनि उनीहरूको साथमा हुनेछन्!
टैग: स्वचालितसंगीत माइक्रोडाटाव्यक्ति माइक्रोडाटाउत्पाद माइक्रोडाटाधेरै प्रस्तावहरूको साथ उत्पादन माइक्रोडाटाट्विटर अनुयायीहरुयूट्यूब छवि
के वेब २.० डिजाइन भत्काउनु पर्छ?
अचम्म छ। यद्यपि यो राम्रो दौड थियो। उपहार होस्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद, डग!
ठिक छ यो मेरो लागि ठूलो आश्चर्य हो किनकि म दिनभर घरमा बिरामी छु! म भन्न चाहन्छु यो तपाईंको ब्लग धेरै पटक पढ्नको लागि प्रेरणा हो, तर मैले पहिले नै हरेक पोस्ट पढेको छु। उत्कृष्ट प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएकोमा धन्यवाद र म आशा गर्दछु कि तपाईं र तपाईंका प्रायोजकहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ।
यस प्रकारको चीजले मलाई मेरो ब्लग-पढ्ने समयलाई मेरी श्रीमती 🙂लाई उचित ठहराउन मद्दत गर्दछ
बधाई छ नूह! मैले भर्खरै तपाईंलाई अतिरिक्त पुरस्कारहरूको लागि लिङ्कहरू पठाएँ।
यो एक रमाइलो प्रतियोगिता थियो - म तपाइँको अर्को प्रतियोगिता डग 😉 को लागी तत्पर छु
भाग्यमानी, भाग्यमानी मान्छे! तपाईंले आफ्नो ब्लग, नोआमा * प्रतियोगिता चलाउनु पर्छ र एउटा आइपड पनि दिनुपर्छ। 😉
अन्य बिजेताहरु कहिले घोषणा हुनेछन्?
यो सबै भव्य पुरस्कार विजेता गए! अर्को प्रतियोगितामा म पक्कै पनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुरस्कार पाउने छु... मलाई लाग्दैन कि यो प्रतियोगिताले 1 विजेता मात्र भएकोले धेरै ध्यान आकर्षित गरेको छ। (तर यसले नूहलाई खुसी बनायो!)
ओह ठीक छ! त्यतिबेला मैले गलत बुझे ।
मलाई आशा छ कि तपाईंको अर्को प्रतियोगिताको लागि, तपाईंले मानिसहरूलाई पनि प्रवेश गर्न सजिलो बनाउनुहुनेछ। लेख्नको लागि 10 प्रायोजकहरू हुनु धेरै उत्साहजनक छैन। अवश्य पनि हामी सबै अतिरिक्त प्रविष्टिहरू चाहन्छौं, तर तपाईंको लागि अझ प्रभावकारी हुन सक्ने चीजहरूको लागि, जस्तै तपाईंलाई SU मा थम्ब्स अप दिने, तपाईंको फिडको सदस्यता लिने, तपाईंलाई Technorati मा मनपराउने, इत्यादि...
यद्यपि मेरो विचार। 🙂
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::21। बिहान
राम्रो पोस्ट। तपाईले केहि उत्कृष्ट बिन्दुहरू बनाउनुहुन्छ जुन धेरै मानिसहरूले पूर्ण रूपमा बुझ्दैनन्।
"यसमा ढिलो रन को लागी माफ गर्नुहोस्! हामीले Ade लाई प्रविष्टिहरूको सूची पठाएका छौँ जसमा प्रत्येक प्रविष्टिसँग अनियमित संख्या सम्बन्धित छ (एक्सेलमा RAND प्रकार्य प्रयोग गरेर र त्यसपछि स्तम्भ क्रमबद्ध गर्दै)। हामीले त्यसपछि Hannes लाई 108 प्रविष्टिहरू भित्र एक अनियमित नम्बर चयन गर्यौं ताकि Hannes को विजेता को हुनेछ थाहा छैन। wpstar.com मा $ 1,000 उपहारको विजेता नोआ थिए!
मलाई मन पर्यो कि तपाईंले कसरी व्याख्या गर्नुभयो। धेरै उपयोगी। धन्यवाद।